Silver iodide: ihe ọ bụ, njirimara na ojiji | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n’ime mmiri ọgwụ mepụtara arụmụka kachasị na afọ ndị gara aga bụ ọlaọcha iodide. Ọ bụ onyinye inorganic mejupụtara ọlaọcha atọm na atọm atom. Ọ bụ ihe siri ike na-acha odo odo na-acha odo odo nke na-agba ọchịchịrị mgbe ekpughere ya ruo ogologo oge. Ọ bụghị soluble na mmiri mana ọ nwere ike igbari na ọnụnọ dị elu nke ion ion.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara, njirimara na ojiji nke ọlaọcha iodide.
2 Njirimara Iodide ọlaọcha
3 Silver iodide na-eji
Anyị na-ekwu maka ihe mejupụtara mkpụrụ osisi mejupụtara ya na ice dị ka nke ice. Kemgbe ọtụtụ afọ, ahụmịhe nke onyinye a tozuru oke ma nyekwa ya ọtụtụ ojiji. Otu n'ime ha bụ ije ozi dị ka mkpụrụ iji nwee ike ịmị mmiri ozuzo ma gbanwee ihu igwe. Nke a were ọtụtụ ajụjụ ruru ka nwere mmebi ọlaọcha iodide nwere ike ime mgbe etisasịwo na mmiri. Ọzọkwa, ọ nweghị mmetụta ọ bụla ga-adịte aka na-agbanwe ihu igwe nke mpaghara nwere ike inwe.
Kemgbe narị afọ nke iri na itoolu ejiri ya mee ihe na foto n'ihi ike iji ọchịchịrị gbaa. A na-ejikwa ya ọgwụgwọ antimicrobial. N'oge na-adịbeghị anya enwere ụfọdụ ọmụmụ banyere iji ọlaọcha iodide na mwepụ nke iodine redioaktivu na mkpofu ewepụtara na osisi ike nuklia.
Ọ bụ onyinye na ọ na-egbu mmadụ, anụmanụ na osisi. Ya mere, enwere nnukwu esemokwu banyere iji ọlaọcha iodide eme ihe maka imeziwanye ihu igwe na ịmepụta mmiri ozuzo. A na-emepụta ihe owuwu a site na steeti oxidation nke ọlaọcha na ayodiin na valence -1. Njikọ dị n’etiti ion abụọ a siri ike ma kwụsie ike. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kpatara na ọ naghị esi ike ịgbanye na mmiri. Ngwurugwu kristal na-adabere na ọnọdụ okpomọkụ anyị nọ na ya. N'okpuru ogo 137 enwere ụdị cubic, n'etiti ogo 137 na 145 anyị nwere ihe siri ike nwere agba odo odo ma ọ bụ nke yiri beta. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị elu karịa ogo 145, ọ ga-eweta ọlaọcha ahụ iodide nwere agba odo na n'ụdị alpha.
Njirimara Iodide ọlaọcha
Anyị maara na n'ọdịdị anụ ahụ ya, ọ siri ike na agba odo odo nke na-etolite kristal hexagonal ma ọ bụ cubic. Ngwurugwu ya bụ gram 234.773 maka ahịhịa ọ bụla ebe agbaze ya bụ ogo 558. Ka Heliodorus wee sie ọlaọcha, ọ ga-eru ogo 1506.
Dị ka anyị kwurula na mbụ, ọ bụ ihe na-adịghị arụ ọrụ na-edozi mmiri. A naghị edozi ya na acid ma e wezụga hydroiodic acid ma na-edozi soluble na ngwọta ndị dị ka alkali bromides na alkali chlorides. N'etiti ya chemical Njirimara anyị asịd na-lekwasị dị ka ogologo dị ka ha na-elu okpomọkụ na ọgụ nwayọọ nwayọọ. A na-agbaze ihe ngwọta nke nwere iodide ion dị ukwuu, na-eme ka iodine na ọlaọcha dị mgbagwoju anya. Otu n'ime ihe onwunwe nke ọ na-apụ apụ bụ na ọ na-emetụta ìhè. Ọ bụrụ na ekpughere ọkụ ahụ ogologo oge, ọ na-eji nwayọọ nwayọọ na-agba ọchịchịrị ma mepụta ọla ọcha.
Silver iodide na-eji
A na-enweta onyinye a na ọdịdị n'ụdị ịnweta iodargyrite. Ozugbo ọ dị na ụlọ nyocha, ọ nwere ike ịkwadebe site na ikpo oku ọlaọcha nitrate na alkaline iodide ngwọta dị ka potassium iodide. N'ụzọ nke a, ọlaọcha iodide bụ ihe eji aka mepụta.
Otu n’ime ojiji ojiji nke ọlaọcha iodide na arụmụka n’akụkọ ihe mere eme nile bụ iweta mmiri ozuzo. ama m You nwere ike tinye n’igwe ojii ka ị gbanwe ọnụọgụ ma ọ bụ ụdị mmiri ozuzo. Ọ nwere ike ịkpalite usoro akụ mmiri igwe, gbasasịa nkịta oyi ma ọ bụ belata ajọ ifufe. Iji mee nke a, enwere ike ịchụsasị ya dị ka a ga - asị na ọ bụ mkpụrụ dị n’ime igwe ojii oyi nke mmiri mmiri juru na ya. Eta pụtara na ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru ogo 0. Site n’inwe ngwongwo kristal nke yiri nke ice, ọ na-eme ka mmiri na-ajụ oyi sie ike.
Nsogbu nke iji ọlaọcha iodide maka ịmepụta mmiri ozuzo bụ nsogbu ya. Ma ọ bụ na mgbe achụsasịrị dị ka mkpụrụ na igwe ojii a na-ahụ ya n'ime ya ma mmiri ozuzo na-asa ya. Ọnụnọ nke ọlaọcha soluble siri ike na mmiri ozuzo bụ ihe a na-aghaghị iburu n'uche ebe ọ na-emetọ ma na-egbu egbu na osisi, anụmanụ na ụmụ mmadụ. Gburugburu mmiri mmiri na-emetụtakwa anụmanụ na ahịhịa niile.
Cloud seeding bụ nnwale emere na iri afọ ole na ole gara aga. Ọ bụrụ na igwe ojii kụrụ n'otu n'otu, nwere ike ịmepụta a ọlaọcha iodide mmetụta. Dika otutu ihe omumu na nso nso a si di, onu ogugu nke iodide nke achoputara na ebe eji usoro igwe ojii mee ihe kariri oke nke o na-egbu egbu nye otutu azu na ihe ndi ozo.
Enwere ike ịsị na naanị iji ezi iodide ọlaọcha eme ihe ga-eme ka ifufe daa mbà, wee belata nsonaazụ ha.
Dị ka anyị kwurula na mbụ, n'ihi mmetụta nke ìhè ka ejiri ya na foto. Ọ bụ ihe nwere ike ịmeghachi n'ihu ìhè. Nke a pụtara na ọ na-eji na inweta photosensitive ihe ndị dị otú ahụ dị ka foto na-apụta nke na kristal na e etinyere na kristal. Ekele maka ọlaọcha iodide anyị nwere ike ịse foto site na igwefoto ochie.
Ọzọ ojiji bụ na mwepụ nke redioaktivu ayodiin. Dika o nwere nnukwu insolubility, achoputala iwepu ayodiin redio nke achoputara n'ime ahihia ocha eweputara na osisi ike nuklia.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ọlaọcha iodide na ojiji ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Silver iodide